Salama daholo, eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona, izay fantatra amin'ny anarana hoe SHG Urban. Izy io no fampiharana tsara indrindra, izay manolotra fanampiana amin'ny fitantanana ny vondrona misy anao. Izy io koa dia manome fomba sy hetsika samihafa hitantanana ny vondrom-piarahamoninao na ny vondrona-Help.
Misy olona samy hafa, izay mamorona karazana vondrona isan-karazany hanampiana olona hafa. Noho izany, sarotra ho an'ny mpanoro hevitra ny mitazona ny zavatra rehetra amin'ny toerana iray. Noho izany, zavatra tena sarotra izy io, izay mandany fotoana betsaka amin'ny fitantanana ny fizotrany rehetra.
Noho izany, ity fampiharana ity dia novolavolaina, izay manolotra fomba samihafa hitazonana ny vondrona sy ny mpikambana. Azonao atao ny mampiasa an'io fampiharana io mba hitazomana ny mombamomba ny vondrona sy ny firafiny. Misy endri-javatra maro isan-karazany amin'ity fampiharana ity, izay hozarainay aminareo rehetra.
Raha hampiasa an'ity rindranasa ity ianao dia amporisihinay ianao hahafantatra momba izany. Ka hizara ny momba an'ity rindranasa ity izahay. Raha manana olana amin'ny fidirana amin'ireo endriny rehetra ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Topimaso momba ny SHG Urban
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny CODE LLC. Fampiharana Android maimaim-poana izy io, izay manome rafitra fitantanana tsara indrindra hamolavola karazana vondrona. Izy io koa dia manolotra fampahavitrihana mba hifandraisana tsara eo amin'ny mpikambana.
Mila manampy antsipiriany arakaraka ny vondrona misy anao ianao, izay manome anao ny rafitry ny fandaminana fivoriana. Azonao atao ny mametraka tanjona amin'ny fivoriana ary mizara izany amin'ireo mpikambana hafa. Azonao atao koa ny manampy mpikambana ao amin'ny vondrona miaraka amin'ity sehatra ity hizara fampahalalana manan-danja.
Azo atao ihany koa ny fanangonana vola sy kajy haingana. Matetika ny olona dia manao vondrona-fanampiana mba hitsitsiana vola ary hizara ny vola amin'ireo mpikambana sahirana. Io no fomba tsara indrindra hitehirizana vola amin'ny toe-javatra maika.
Afaka mahita lalao samihafa ihany koa ianao, izay azonao lalaovina amin'ny vondrona. SHG Urban App dia manolotra lalao samihafa, ahafahanao milalao sy manangana fifampitokisana amin'ireo mpandray anjara. Manolotra fanangonana goavana lalao isan-karazany izy io, izay azonao atao ny misafidy mifanaraka amin'ny tanjon'ny fivoriana.
Ho an'ny karazana fanovana na fanapahan-kevitra, ny mpikambana rehetra dia tokony hifanarahana. Raha misy mpikambana tokan-tena tsy mifanaraka amin'ny fanapaha-kevitra. Avy eo dia tsy hanome sosokevitra na handroso azy io intsony. Noho izany, raha handray fanapahan-kevitra ianao dia mila mandamina ny tsara indrindra, amin'izay tokony hifanarahan'ny rehetra.
Misy endri-javatra mahavariana kokoa, izay azonao atao mba hahatonga ny Vondrona fanampiana mahomby. Noho izany, misintona fotsiny ny fampiharana serp shg ary alao ny endri-javatra tsara indrindra amin'ity fampiharana ity. Raha sendra olana amin'ny fampiasana ity app ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
anarana SHG Urban
Anaran'ny fonosana com.elf_help_group_code_innovation_one_hen
Araka ny efa nolazainay ny sasantsasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy bebe kokoa. Noho izany, hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe izahay rehetra eto amin'ity lisitra eto ambany ity. Azonao atao koa ny mizara ny fiainanao manokana amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
App an'ny mpanamora ihany
Raha te-hisintona ny SHG Urban Apk dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store ary mampidina azy io koa ity pejy ity. Manome rohy miasa azo antoka sy miasa ho an'ity fampiharana ity izahay rehetra. Noho izany, tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity.
Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandrasa segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana. Mila mamela ny 'Source tsy fantatra' avy amin'ny Security Security ianao, alohan'ny fizotry ny fametrahana.
SHG Urban no fampiharana tsara indrindra hitantanana karazana vondrona. Ka ampidino ity rindrambaiko ity ary mahazoa ny fitaovana rehetra amin'ny tolotra maimaimpoana rehetra. Raha manana olana ianao amin'ny fampidinana ity app ity dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags SHG Urban, SHG Urban Apk, SHG Urban App Post Fikarohana
Gogoanime.TV Apk Download Ho an'ny Android [Vaovao 2022]